Khabar Kantipur » पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घट्यो,मूल्य सुची सहित ?
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घट्यो,मूल्य सुची सहित ?
शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार हवाई ईन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको हकमा खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत राखिएको जनाइएको छ ।
पेट्रोलमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ घटेको छ । त्यस्तै डिजेल र मट्टीतेलमा १ – १ रुपैयाँ घटेको निगमले जनाएको छ । काठमाण्डौको नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य पेट्रोल प्रतिलिटर १०९ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ९७ रुपैयाँ भएको छ ।